Wararkii ugu dambeeyay Shabaab iyo ciidamada Dowladda oo Shabellaha Dhexe ku dagaalamay – STAR FM SOMALIA
Wararkii ugu dambeeyay Shabaab iyo ciidamada Dowladda oo Shabellaha Dhexe ku dagaalamay
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabellaha Dhexe, ciidamada Shabaab iyo kuwa Dowladda Federalka Somaliya ayaa ku dagaalamay deegaano ku dhaw Degmada Jowhar.
Dagaalkaan ayaa yimid, kadib markii ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Madax Kisi oo ku yaalo Gobolka, islamarkaana ay ku sugnaayeen Ururka Al Shabaab.
Dagaalka oo qaatay ku dhawaad saacad ayaa la sheegay in ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ay u suuragashay inay la wareegaan gacan ku haynta Deegaankaasi.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Dowladda oo u waramay Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in Shabaabka dagaalkaasi Khasaare ay ku gaarsiiyeen, ugu yaraana 3 dagaalyahano inay ka dileen.
Wararka ayaa sheegaya Ciidamadii Shabaabka ka tirsanaa ee looga itaal roonaaday dagaalka inay halkaasi isaga carareen, maadaama ciidamada Dowladda oo si aad ah isku soo abaabulay dagaalka ay la galeen.
Deegaanka Madax Kisi ayaa la sheegaa maalinta Arbacada inay isugu yimaadaan ganacsato badan oo kala iibsata Geela, waana sababta ugu weyn ee ciidamada ay ugu mintidiin inay halkaasi Shabaabka ka saaraan, si ay canshuurta Geela dadka uga qaadaan ciidamada.
Xaalada Deegaanka Madax Kisi ayaa ah hada mid degan, balse waxaa laga cabsi qabaa dagaalyahano Shabaab ka tirsan inay weerar rogaal celis ah ay ku soo qaadaan deegaanka.
Madasha Wada-tashiga Qaran oo ku baaqay in la dhiso Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe ka hor doorashada
Is bedel lagu sameeyay Gudoomiye-yaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir qaarkood